: 09 422 422 001, 09 422 422 007
2020 - ရွှေငါးလေး
2020 - ပဲခူးဆားနှင့်သူ၏ဗိုင်းရပ်စ်များ
2020 - ရိုက်ကွင်းမှတ်တမ်း
2020 - အသက်ကိုအသက်ထက်ပို၍ချစ်သည်
2019 - ကတုံးကဗုံးကြဲမှာ
2017 - ရည်းစားဦး
2017 - ကျွန်မကမ္ဘာပြိုသောအခါ
2017 - ပါဏာတိပါတာ
ရုပ်သံအရည်အသွေးက မြင့် အချပ်ကလည်း တစ်ချပ်တည်း ဈေးကလဲ 450 တဲ့ ....
“ရန်နိုင်အောင် မှာရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အဖေဖြစ်သူမှာလူဆိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ကျော်နန္ဒ ဖြစ်ပေမယ့် ရန်နိုင်အောင် တစ်ယေက်မသိခဲ့တော့ ရန်နိုင်အောင် ရဲ့ချစ်သူ မိုးမခ မှာ ရဲများကအလိုရှိနေတဲ့ မိုးဇက် နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေခဲ့တော့ မိုးမခ မှာရဲအရာရှိချစ်သူအတွက်ကြိုးပမ်းရာကအစပြုပြီး ရဲများကအလိုရှိနေတဲ့ သူတွေကတော့ ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ … ရန်နိုင်အောင် ကကော ဘယ်သူ့ကိုဖမ်းမိသွားမလဲ …မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကဘာတွေဖြစ်နေမလဲ …..”
“သိပ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးအိမ်ကသဘောတူဘဲထွက်ပြေးကြရင်းကားတိုက်မှုဖြစ်ကာချစ်သူတွေရဲ့ဘဝမလှတဲ့ ကောင်းကင်သစ် နဲ့ ကြယ်စင်ခ တို့မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့် ကောင်းကင်သစ် ရဲ့မျက်နှာမှာပြုပြင်ထားတဲ့အပြင် အတိတ်ကိုမေ့နေတဲ့ ကြယ်စင်ခ မှာတွေ့ကြပေမယ့်မမှတ်မိဘဲနေခဲ့တော့ ကောင်းကင်သစ် တစ်ယောက်ချစ်သူမှာပြန်လည်မှတ်မိဖို့အရေးနည်းမျိုးစုံကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အရာထင်ပါ့မလား …”
“မင်းသမီး နန့်နန့်ပြာ နဲ့ မင်းသမီး လွန့်လွန့်လူး တို့မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြိုင်အဆိုင်တွေဖြစ်ကြပြီး ချစ်ရတဲ့ချစ်သူမှာလည်း မထင်မှတ်ဘဲတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့တော့ နန့်နန့်ပြာ နဲ့ လွန့်လွန့်လူး တို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲ … အနုပညာလောကကို ဖွလိုက်မယ့် ဂျာနယ်တိုက်ကလည်းဘယ်လိုလိုက်ဖွမလဲဆိုတာ … နန့်နန့်ပြာ နဲ့ လွန့်လွန့်လူး တို့ရဲ့အပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ အကယ်ဒမီရမယ့်သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲ …”
“ကိုဖြိုး မှာမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ခါကာစအချိန်မှာသူဌေးရဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုလက်ခံခဲ့ရာကအစပြုပြီး ကိုဖြိုး တစ်ယောက် အဲဒီစမ်းသပ်မှုဒဏ်ကိုမခံစားရခင်မှာ ရီဝင်း နဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ စမ်းသပ်မှုရဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရတော့ သူဌေးရဲ့စမ်းသပ်မှုမှာအောင်မြင်သော်ငြားလည်း ကိုဖြိုး မှာသဘာဝကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို တစ်နှစ်တာပတ်လုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပေမယ့်လည်း ရီဝင်း မှာချစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုစာနာနားလည်ပေးပြီးဂရုစိုက်ချစ်နေပေမယ့် ကိုဖြိုး ရဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အဖြစ်ကဘာလဲ …. စမ်းသပ်မှုဆိုတာကကောဘာလဲ….”
မိဘမဲ့ဖြစ်တဲ့ ရာဇာ မှာ Church ကျောင်းမှာပညာသင်ကြီးပြင်းခဲ့ရပေမယ့် Church ကျော်ငးတော်ကြီးရဲ့ဖျက်သိမ်းခံရမယ့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် မကောင်းမှုဒုစရိုက်လောကထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့သူ ရာဇာ မှာမထင်မှတ်ဘဲ မေဦး ကိုဆုံတွေ့ပြီး ဓားစာခံအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာရာ ရာဇာ နဲ့ မေဦး မှာ သံယောဇဉ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတော့ ရာဇာ မှာ Church ကိုကယ်တင်နိုင်မလား … ဥပဒေကပေးတဲ့အပြစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးခံယူလိုက်မလဲဆိုတာ …..
အောင်လှ နဲ့ စံပယ်ထွေး တို့မှာသိပ်ချစ်ကြတဲ့မိဘမဲ့မောင်နှမတွေဖြစ်ကြတော့ အောင်လှ မှာချစ်ရတဲ့ ကြိုင်သင်း ထပ်ညီမဖြစ်သူ စံပယ် ကိုဦးစားပေးနေတော့ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့အချစ်ရေးကသာယာပါ့မလား …. စံပယ် ရဲ့ဘဝမှာမထင်မှတ်ဘဲအမဲစက်ကြီးတစ်ခုဘယ်လိုထင်ရှားသွားမလဲ … အဲဒီအမဲစက်ကြောင့် အောင်လှ ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပြီးနှစ်ခြမ်းကွဲသွားမလဲဆိုတာ …. စံပယ် ရဲ့အမဲစက်ကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲ ….
[email protected] privacy-policy